Soomaalidu maxay reer Maakhir ka Baran karaan? | allsanaag
Soomaalidu maxay reer Maakhir ka Baran karaan?
Burburka Soomaaliya iyo dagaalka aan dhamaadka lahayn ee ka socda gudaha Soomaaliya dhowr iyo labaatanka sanadood, waxa u sabab ahaa markuu bilowday iyo maantaba waa Qabyaalad iyo hogaamiye si indho la’aan ah loo dabo galo, isaga oo lagu raacayo qabiilka la wada yahay .
Bulshada reer Maakhir, iyagu Soomaali intooda kale way kaga duwanaayen arintan.
Tusaale fiican waxaan u soo qaadan karnaa:
Maamulkii sadexaad ee Soomaaliya laga sameeyey, marka laga yimaado maamulada Hargaysa, iyo Garoowe, waxa uu ahaa maamulkii Maakhir oo xaruntiisu ahayd magaalada Badhan ee gobolka Sanaag.
Maamulkan ayaa waxa hogaaminayey Jibriil Cali Salaad, oo ka mid ahaa Saraakiishii hore ee Ciidamaddii xooga dalka Soomaaliyeed , ahaana gudoomiyihii gobolka Sanaag ee ugu danbeeyey dawladdii kacaanka. Jibriil, waxa uu ka soo jeedaa qoyska Saldanada Maakhir iyo sidoo kale magaalo madaxda Gobolka Sanaag , celcelis ahaan dadakii ugu badnaa ee qurbaha joogay maalintii uu maamulka ku dhawaaqay waxay ka soo jeedeen beeshiisa . Jibriil Cali Salaad laguma Taageerin si indho la’aan ah iyo sida maanta Cali Khaliif uu garaadkiisa oo ay dadka isugu xigaan uu ugu taageerayo in reer Khaaumo Hargaysa u guuraaan. Jibriil iyo Cali Khaliif labaduba waxay ka soo jeedaan Qoysaska haya Garaadnimada iyo Saldanada beelaha Dhulbahante iyo Warsangeli. Laakiinse waxay ku kala duwan yihiin beesha Reer Garaad ee Warsangeli waxay ogyihiin ma’suuliyadda ka saaran dadka iyo degaanka,
Arintaas Jibriil Cali Salaad aan lagu taageerin bel ahaan, waxay xoojisay midnimada Maakhir iyo in Bulshadu si nabad gelyo ah ay ku wada noolaadaan, oo ay wada ilaashadaan dantooda guud ee ka wada dhaxaysa . Waana tani keentay in maamulka SNM mar walba uu duulaan ku soo qaado Maakhir uu ku guul daraysto. Sababtuna waa midnimada Maakhir
Tusaalaha labaad, waa dhibka maanta ka jira Soomaaliya ee ah argagixisnimada lagu taageero qabiilka, sida hadalkii Daahir Aweys uu horay u sheegay ee ahaaa “sida uu Kaluunku biyaha ugu nool yahay in iyaguna ugu nool yihiin taageerada shacabka qabiilka ku taageera”
Maxamed Saciid Atom oo ka soo jeeday Makhir, waqtiyada qaarkood wuxuu ka mid ahaa kooxdan sida Kaluunka ugu dul nool shacabka . Laakiinse Bulshada reer Maakhir waa ka hor yimaadeen fikirkaas . Si indho la’aan ahna uma raacin Atom.Bulshdii i reer Maakhir ee u dhimatay diidmada fikirkan khaldan ayaa waxay ka badnaayeen dadkii Atom ku raacay qabiilka.
Tusalaha sadexaad waa wada noolaashaha Bulshada iyo deriska wanaaga.
Sanadkan aynu ku jirno Soomaaliya waxa ka dhacday abaar aad u xun, goboladdii ay aad u saamaysana waxa ka mid ahaa Gobolada Sanaag iyo Awdal. Bulshada reer guuraaga ah ee reer Maakhir markii ay noloshu ku adkaatay, waxay bilaabeen inay guuraann. Galbeed waxay u gaareen degaano hoos taga degmada Burco ee gobolka Togdheer, Bari waxy hoos u dhaafeen Kobdhexaad, Ufayn iyo Bariga fog ee gobolka Bari . Koonfur waxay u gaareen baadiyaha Garowe ee gobolka Nugaal , koonfur galbeedna baadiyaha Laascaanood ee gobolka Sool iyo degaano ka mid ah Howdka. Intaas oo Gobol oo Bulshada reer Maakhir ay u hayaameen waxa lagu soo dhoweenayey gacmo furan iyo taariikh deris wanaag ah oo ay horay u wada lahaayeen beelaha ay deriska ka yihiin afara jiho oo ay weheliso beesha Yamaneed ee ka xigta waqooyiga.
Reer Guuraaga afarta Jiho u hayaamay markii roobku da’ay si nabad gelyo ah oo maalmo iyo habeeno qaadatay ayeey ku soo laabteen. Baasaboor waxa u ahaa oo Soohdimaha beelaha u dhaxeeya ay ku soo dhaafayeen “Waxaan ka soo jeednaa beesha reer Maakhir’
Gebagebadii dhowaan Suldaanka beesha Maakhir waxa uu ku dhawaaqy in laysu diiwaan geliyo SNM, Haddii qaranimada iyo midnimada Soomaaliya laga horumarin lahaa QABIIL iyo aniga ayuu i xigaa Suldaanku . Magaalooyinka Badhan, Hadaafimo, Xingalool, Carmale, Ceelbuh IWM waxa lagu arki lahaa safaf dhaadheer oo loogu jiro isdiiwaangelinta. Bulshada degmada Badhan degtaa ayaa qabiil iyo Qabyaalad waxay ka doorteen Qaranamimo iyo midnimada Soomaaliya . Taasina waa tusaale fiican oo Soomaali ineeda kale ay mudan tahay inay kaga daydaan. Inta maalin walba ay u sabacabka ku tumayaan danaysyte Qarandiid ah oo Jaranjaro ka dhiganaya Bulshada si uu xil ugu helo xil ama lacag
← Ganacsade lagu dilay Laascaanood Saudi Arabia: Eid al-Adha 2016 to begin on September 12 →